100million – Page 29 – Cele News TV
မင်းမော်ကွန်းကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပြီး ယူနီဖောင်းက အစ သေချာဝတ် ဆင်ပေးနေတဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့ပုံရိပ်မျ
အမှန်တရားဘက်ကနေ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရပ်တည်ပြီး တော်လှန်ရေးမှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ကာ ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းကို ပြည်သူတွေကလည်းလေးစားချစ်ခင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ မင်းမော်ကွန်းက လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်နေရာကို ရောက်ရှိနေပြီး စစ်ပညာတွေကို သင်ယူလေ့လာနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အရာရာကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ မင်းမော်ကွန်းက သူ့ရဲ့မိသားစုလေးနဲ့အတူ အားတင်းရင်း […]
ပြည် သူ တွေဆီ က အလှူခံတဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဒဲ့ပြောလာတဲ့ သရုပ် ဆောင်ကျော် ထက်အောင်
ပြည်သူတွေဆီကအလှူခံတဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီးဒဲ့ပြောလာတဲ့သရုပ်ဆောင်ကျော်ထက်အောင် သရုပ်ဆောင်ကျော်ထက်အောင်ကတော့ဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်းသရုပ်ဆောင်ပီပြင်လှတာ ကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသားချောပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ထက်အောင်ကတော့သရုပ်ဆောင်ကောင်းရုံတင်မကပဲအသံပါဝါကောင်း ကောင်းနဲ့ပွဲတွေမှာအစီအစဥ်တင်ဆက်သူလဲလုပ်ပါသေးတယ်နော်။ ကျော်ထက်အောင်ကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကတစ်သားတည်းပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ် ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲသရုပ်ဆောင်ကျော်ထက်အောင်ကပြည်သူတွေဆီကအလှူခံတဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီးဒဲ့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ကျော်ထက်အောင်ကမည်သည့်နေရာသို့မိမိဦးဆောင်၍လှူပါမည်၊ ပါဝင်ကြပါဆိုပြီးဘယ်တုံးမှမဆော်သြထားပါ။ သော်ကြောင့်မိမိနာမည်အလွဲသုံးစားလုပ်၍အလှူငွေကောက်ခံသည့်အခါချင့်ချိန်၍ယုံကြပါရန်ဆိုပြီးတော့ သူရဲ့InstagramStoryမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Zklcelenews ပြည်သူတွေဆီကအလှူခံတဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီးဒဲ့ပြောလာတဲ့သရုပ်ဆောင်ကျော်ထက်အောင်သရုပ်ဆောင်ကျော်ထက်အောင်ကတော့ဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်းသရုပ်ဆောင်ပီပြင်လှတာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသားချောပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ထက်အောင်ကတော့သရုပ်ဆောင်ကောင်းရုံတင်မကပဲအသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ပွဲတွေမှာအစီအစဥ်တင်ဆက်သူလဲလုပ်ပါသေးတယ်နော်။ကျော်ထက်အောင်ကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကတစ်သားတည်းပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲသရုပ်ဆောင်ကျော်ထက်အောင်ကပြည်သူတွေဆီကအလှူခံတဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီးဒဲ့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျော်ထက်အောင်ကမည်သည့်နေရာသို့မိမိဦးဆောင်၍လှူပါမည်၊ပါဝင်ကြပါဆိုပြီးဘယ်တုံးမှမဆော်သြထားပါ။သော်ကြောင့်မိမိနာမည်အလွဲသုံးစားလုပ်၍အလှူငွေကောက်ခံသည့်အခါချင့်ချိန်၍ယုံကြပါရန်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့InstagramStoryမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Zklcelenews klcelenews
စီးပြားေရးၾကပ္တည္းေနေၾကာင္း ထုတ္ျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ နႏၵာလႈိင္ရဲ႕ခင္ပြန္း ဦးေဇသီဟ …
စီးပြားေရးၾကပ္တည္းေနေၾကာင္း ထုတ္ျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ နႏၵာလႈိင္ရဲ႕ခင္ပြန္း ဦးေဇသီဟ … The post စီးပြားေရးၾကပ္တည္းေနေၾကာင္း ထုတ္ျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ နႏၵာလႈိင္ရဲ႕ခင္ပြန္း ဦးေဇသီဟ … appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
မကြာခင်သရုပ်‌ဆောင်လူမင်း လွတ်မြောက် တော့မည့်ဟု ပြောပြပေးလာတဲ့ ဇနီးဖြစ် သူခင်စပယ်ဦး
မကြာခင်သရုပ်‌ဆောင်လူမင်းလွတ်မြောက်တော့မည့်ဟုအသိပေးလာတဲ့ဇနီးဖြစ်သူခင်စပယ်ဦး သရုပ်ဆောင်လူမင်းကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာဆိုရင်ပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကတစ်သားတည်းရပ် တည်ပေးခဲ့ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခဲခဲ့ရပြီးနေအိမ်မှာပဲအဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်လူမင်းအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုဝင်များနဲ့ပရိတ်သတ်၊ပြည်သူများကစိုးရိမ်ပူပန်နေရပါတယ် ၊အမြန်ဆုံးပြန့လည်လွှတ်မြောက်ပါစေလို့လဲနေ့စစသ်နဲ့အမျှဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲဇနီးဖြစ်းကမကြာမီသရုပ်ဆောင်လူမင်းပြန်လည်လွှတ် မြောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောကြားလာပါတယ်နော်။ ခင်စပယ်ဦးးကမနေ့ညကလည်းဦးလူမင်းကိုအိပ်မက်တွေမက်နေတာ၊၂၇ရက်နေ့လွှတ်မလိုလိုဆိုပြီးတော့သူမနဲ့အရမ်းခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့စာတွေပို့ပြီးပြောဆိုနေပုံကိုသူငယ်ချင်းဖြစ်သူကပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ကူးယူပြီးမျှဝေတင်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ klcelenews မကြာခင်သရုပ်‌ဆောင်လူမင်းလွတ်မြောက်တော့မည့်ဟုအသိပေးလာတဲ့ဇနီးဖြစ်သူခင်စပယ်ဦးသရုပ်ဆောင်လူမင်းကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာဆိုရင်ပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကတစ်သားတည်းရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခဲခဲ့ရပြီးနေအိမ်မှာပဲအဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်လူမင်းအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုဝင်များနဲ့ပရိတ်သတ်၊ပြည်သူများကစိုးရိမ်ပူပန်နေရပါတယ်၊အမြန်ဆုံးပြန့လည်လွှတ်မြောက်ပါစေလို့လဲနေ့စစသ်နဲ့အမျှဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲဇနီးဖြစ်သူဇင်မာဦးကမကြာမီသရုပ်ဆောင်လူမင်းပြန်လည်လွှတ်မြောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောကြားလာပါတယ်နော်။ခင်စပယ်ဦးးကမနေ့ညကလည်းဦးလူမင်းကိုအိပ်မက်တွေမက်နေတာ၊၂၇ရက်နေ့လွှတ်မလိုလိုဆိုပြီးတော့သူမနဲ့အရမ်းခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့စာတွေပို့ပြီးပြောဆိုနေပုံကိုသူငယ်ချင်းဖြစ်သူကပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ကူးယူပြီးမျှဝေတင်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ klcelenews klcelenews
ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြရင်း အရမ်းလွမ်းနေကြောင်းပြောပြလာတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
August 25, 2021 100million 0
ၿပီးခဲတဲ့ၾသဂုတ္လ၂၁ရက္ေန႔မွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းရဲ့ခင္ပြန္းကကိုဗစ္ေရာဂါေၾကာင့္ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။မိသားစုနဲ႔ထပ္တူဝမ္းနည္းေၾကကြဲရပါတယ္၊ဒီကေန႔မွာဆိုရင္လဲသ႐ုပ္ေဆာင္နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းကခင္ပြန္းနဲ႔အမွတ္တရတစ္ခ်ိဳ႕ကိုျပန္လည္ေျပာျပ လာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းကသူမ်ားေတြလွလွပပဝတ္Trevi Fountainနဲ႔ဓာတ္ပုံရိုက္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ကညအိပ္ဝတ္စုံႀကီးနဲ႔ေရာက္သြားေလသည္၊ဒါေပမဲ့လဲခပ္တည္တည္ပဲဆိုၿပီးေတာ့ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြတုန္းကပုံနဲ႔စာသားမ်ားကိုျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။ဘယ္သူမွမသိေအာင္PreWeddingသြားရိုက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေပါ့၊ ႏွစ္ေယာက္လုံးရဲ့အေပ်ာ္ဆုံးအခ်ိန္ေတြဆိုလဲဟုတ္တယ္ဠေနာက္၄ႏွစ္ေနရင္ခြဲရမယ္လို႔ဘယ္သူႀကိဳသိမလဲေနာ္။ ခုဆိုအေကာင္းဆုံးအေပ်ာ္ရႊင္ရဆုံးအမွတ္တရေတြနဲ႔ေက်နပ္ပါတယ္၊အားလုံးလဲအတူရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တန္ဖိုးထားပီးခ်စ္ၾကပါ၊အေကာင္းဆုံးအမွတ္တရေတြပဲထားခဲ့နိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကပါဆိုၿပီးေတာ့သူမရဲ့လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္၊စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္။ klcelenews ၿပီးခဲတဲ့ၾသဂုတ္လ၂၁ရက္ေန႔မွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းရဲ့ခင္ပြန္းကကိုဗစ္ေရာဂါေၾကာင့္ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။မိသားစုနဲ႔ထပ္တူဝမ္းနည္းေၾကကြဲရပါတယ္၊ဒီကေန႔မွာဆိုရင္လဲသ႐ုပ္ေဆာင္နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းကခင္ပြန္းနဲ႔အမွတ္တရတစ္ခ်ိဳ႕ကိုျပန္လည္ေျပာျပ လာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းကသူမ်ားေတြလွလွပပဝတ္Trevi Fountainနဲ႔ဓာတ္ပုံရိုက္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ကညအိပ္ဝတ္စုံႀကီးနဲ႔ေရာက္သြားေလသည္၊ဒါေပမဲ့လဲခပ္တည္တည္ပဲဆိုၿပီးေတာ့ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြတုန္းကပုံနဲ႔စာသားမ်ားကိုျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္ေနာ္။ဘယ္သူမွမသိေအာင္PreWeddingသြားရိုက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေပါ့၊ ႏွစ္ေယာက္လုံးရဲ့အေပ်ာ္ဆုံးအခ်ိန္ေတြဆိုလဲဟုတ္တယ္ဠေနာက္၄ႏွစ္ေနရင္ခြဲရမယ္လို႔ဘယ္သူႀကိဳသိမလဲေနာ္။ ခုဆိုအေကာင္းဆုံးအေပ်ာ္ရႊင္ရဆုံးအမွတ္တရေတြနဲ႔ေက်နပ္ပါတယ္၊အားလုံးလဲအတူရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တန္ဖိုးထားပီးခ်စ္ၾကပါ၊အေကာင္းဆုံးအမွတ္တရေတြပဲထားခဲ့နိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကပါဆိုၿပီးေတာ့သူမရဲ့လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္၊စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္။ klcelenews klcelenews
အဘေတြကိုယ္တိုင္ တိုင္းျပည္ဖ်က္ဆီးပုံေတြေၾကာင့္ သံေဝဂရေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး
အဘေတြကိုယ္တိုင္ တိုင္းျပည္ဖ်က္ဆီးပုံေတြေၾကာင့္ သံေဝဂရေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး The post အဘေတြကိုယ္တိုင္ တိုင္းျပည္ဖ်က္ဆီးပုံေတြေၾကာင့္ သံေဝဂရေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေ႐ႊ႐ူပါဦး appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
အိမ်ထောင်စု (၃၀၀)စာအတွက် စားသောက်ကုန်တွေလှူဒါန်းဖို့ စီစဉ်နေတဲ့အောင်လေး
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော အောင်လေးကတော့ အခုကာလမှာ စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းနေတဲ့ မိသားစုတွေအတွက် စားသောက်ကုန်တွေလှူဒါန်းပေးဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပါတယ်။ အောင်လေးကတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့မှာ လှူဒါန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အောင်လေးက ကြည့်မြင်တိုင် တစ်ဖက်ကမ်း ဝါးရုံစိပ် ရယ် ၊ အေးရွာပဲခူးချောင်း မှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စု […]
ဩဂုတ်လ၂၄ရက်ညတုန်းကမတရားအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့သရုပ်ဆောင်ဆင်မ ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကစလို့အာဏာသိမ်းခဲ့တာဟာယနေ့ထက်ထိပါပဲ၊တော်လှန်ရေးကြီးအတွင်းမှာလဲအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းများစွာရှိသလိုမတရားအဖမ်းဆီခံရတဲ့ပြည်သူတွေလဲများစွာရှိနေပါတယ်၊ပြည်သူတွေနဲ့အတူအနုပညာရှင်များလဲအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကဆိုရင်မတရားအဖမ်းဆီးခံထရမှာပြန်လည်လွှတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေများစွာရှိသလိုမတရားအဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေလဲရှိနေပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဆင်မကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူတစ်သားတည်းပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှာတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်အမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့သြဂုတ်လ၂၄ရက်နေ့ညမှာဆိုရင်တော့သရုပ်ဆောင်ဆင်မ ကမတရားအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရ ကြောင်းသိရှိရပါ တယ်၊မတရားအဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလဲဘေးကင်းကင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ klcelenews ဩဂုတ်လ၂၄ရက်ညတုန်းကမတရားအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့သရုပ်ဆောင်ဆင်မဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကစလို့အာဏာသိမ်းခဲ့တာဟာယနေ့ထက်ထိပါပဲ၊တော်လှန်ရေးကြီးအတွင်းမှာလဲအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းများစွာရှိသလိုမတရားအဖမ်းဆီခံရတဲ့ပြည်သူတွေလဲများစွာရှိနေပါတယ်၊ပြည်သူတွေနဲ့အတူအနုပညာရှင်များလဲအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကဆိုရင်မတရားအဖမ်းဆီးခံထရမှာပြန်လည်လွှတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေများစွာရှိသလိုမတရားအဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေလဲရှိနေပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ဆင်မကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူတစ်သားတည်းပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှာတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်အမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သြဂုတ်လ၂၄ရက်နေ့ညမှာဆိုရင်တော့သရုပ်ဆောင်ဆင်မ ကမတရားအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရ ကြောင်းသိရှိရပါ တယ်၊မတရားအဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလဲဘေးကင်းကင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ klcelenews klcelenews
လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်နေရာတွင် သူတာဝန်ယူ ထားရတဲ့ အပိုင်းကို အားလုံးသိရှိအောင် ပြသလိုက်တဲ့ ကိုပေါက်
ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကတော့ လက်ရှိမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိနေပြီး တော်လှန်ရေးအတွက်တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးအရ သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို သုံးလကျော် ပိတ်ထားခဲ့ပြီး လတ်တလော ပြန်လည် အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တောထဲမှာ နေထိုင်ရတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့ အခက်အခဲတွေကြားကနေ ဝေမျှပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် […]
နောက်ဆုံးလက်ဆောင်လေးကိုကြည့်ပြီး နှလုံးတွေအောင့်တဲ့အထိ ကြေကွဲခံစားနေ ရရှာတဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန်
အဆိုတော်ရွှေရည်သိန်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ရှေ့သွားနောက်လိုက်နဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းလို့ အားလုံးက ချစ်ခင်ကြတဲ့ သူမတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့အလှူအတန်းတွေကိုလည်း ရက်ရောစွာပြုလုပ်တတ်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။ ဘဝကိုရိုးရှင်းအေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပေမယ့် သေခြင်းတရားက ခွဲခွာသွားခဲ့တဲ့အတွက် အခုဆိုရင်တော့ ခင်ပွန်းကိုလွမ်းဆွတ်နေတဲ့ သတိရစိတ်ကြောင့် သူမတစ်ယောက်တည်း ဝမ်းနည်းနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ သိပ်ချစ်ရတဲ့ခင်ပွန်းကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက် ဖြေမဆည်နိုင်အောင် […]
« 1 … 28 29 30 … 90 »